घरजग्गाको कारोबार सुधारोन्मुख | गृहपृष्ठ
Home Uncategorized घरजग्गाको कारोबार सुधारोन्मुख
पुस २, काठमाडौं । लामो समयसम्म ओरालो लागेको घरजग्गाको कारोबार पछिल्ला महीनामा केही मात्रामा बढेको छ । कारोबार बढेका कारण भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सङ्कलन गर्ने राजस्व गत आवको अघिल्लो चार महीनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विभागले चालू आवको ४ महीनामा घरजग्गाको कारोबार दस्तुरबाट रू. १ अर्ब १ करोड ९७ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा रू. ९५ करोड २४ लाख ७२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । विभागले चालू आवमा घरजग्गा कारोबारबाट रू. ४ अर्ब ५० करोड ६५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभागले गत आवमा उपत्यकाबाट मात्र रू. १ अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । विभागले चालू आवमा सङ्कलन गर्ने लक्ष्यको ६९ दशमलव ९३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरिसकेको विभागका उपसचिव कमलप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । चालू आवको कात्तिक महीनासम्म सबैभन्दा बढी डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयले रू. ४ करोड ६५ लाख १० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले बताएको छ । नेपालभर ८३ ओटा मालपोत कार्यालय छन् ।
पछिल्लो समयमा जग्गाको कारोबार बढेको देखिए पनि यो अस्थायी प्रकृतिको भएको तिमल्सिनाले बताए । गत आवको तुलनामा चालू आवमा बैङ्किङ नीति केही खुकुलो भएकाले पनि कारोबार बढेको उनको भनाइ छ । तिमल्सिनाका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म टुक्रा जग्गाको खरीद विक्री धेरै हुने गरेकाले कारोबारको सङ्ख्या अत्यधिक देखिए पनि सोअनुरूप राजस्व सङ्कलन भने हुन सकेको थिएन ।
पछिल्ला समयमा घरजग्गा व्यवसायीहरूले एकीकृत रूपमा जग्गाको कारोबार गर्न थालेकाले थोरै कारोबार भए पनि राजस्व बढ्ने उनले बताए । तिमल्सिनाले भने, ‘विस्तारै बैङ्कले जग्गामा गरेको लगानी फिर्ता हुन थालेको र पुनः जग्गामा लगानी गर्नसक्ने अवस्था बनेकाले पनि जग्गाको कारोबार बढेको हुन सक्छ ।’ हिउँदको समय प्रायःजसो जग्गाको कारोबार बढ्ने भएकाले अहिलेको वृद्धिलाई ‘सिजनेबल’ मात्रुपर्ने उनले बताए ।
विभागका अनुसार चालू आवमा उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पनि जग्गा कारोबार बढेको छ । जिल्लामा सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको र जग्गाको मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले कारोबार बढ्न थालेको तिमल्सिनाको भनाइ छ । जिल्लाहरूमा जग्गाको कारोबार बढ्न थालेकाले पनि समग्रमा कारोबार बढेको देखिएको उनले बताए ।
व्यवसायीहरूले पनि घरजग्गाको कारोबार केही बढे पनि सन्तोषजनक मात्र नसकिने बताएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गामा लगानी गर्न चाहने बैङ्कहरूका लागि तोकेको सिलिङ केही बढेको भए पनि बैङ्कको चर्को ब्याजदरका कारण मानिसले चाहनाअनुसार घरजग्गामा लगानी नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । बैङ्कले घरजग्गा ऋण प्रदान गर्दा ‘डकुमेण्टेशन’लाई बढी कडा गर्न थालेको व्यवसायी विजयराज राजभण्डारीले बताए ।